Home/ Umkhandlu/Imizamo yeDumbe ifufusa imiqumbe yezithelo
IMeya uMnu uMajuba Mavuso
KUBUYE ithemba ngendawo yaseDumbe, ekhungethwe ububha ngenxa yezinga eliphezulu labantu abangasebenzi, njengoba sekunamawadi amabili okuhlelwa ukuba kuqalwe kuwo imayini. IWadi 1 esigodini saseLembe neWadi 7 oBivane, kuhlonzwe ukuthi kunamalahle angaphansi komhlaba asezingeni eliphezulu. Lokhu kuvele ngemuva komhlangano obuphakathi kwezikhulu zoMnyango Wezokumbiwa Namandla neziphathimandla zikaMasipala waseDumbe, lapho kwethulwe khona umbiko obuveza ucwaningo obelwenziwa ngomhlaba wakuleli dolobha. IMeya yaseDumbe, uMnu uMajuba Mavuso ithe lokhu bakubona kuzoqeda ububha ngoba baningi abantu abazothola amathuba emisebenzi uma kufika isikhathi sokuba kuqalwe lezi zimayini zamalahle.
“Empeleni thina singuMkhandlu waseDumbe sasicele ukuba uMnyango Wezokumbiwa Namandla usicwaningele ukuthi lezi zimayini esezavalwa zingakwazi yini ukuba ziphinde zivulwe, zisebenze ngoba sixakwe ububha kule ndawo yethu. Nokho kuthe kula masonto edlule izikhulu zoMnyango, zafika sezisilethele umbiko osivezela ukuthi kutholakale amawadi amabili ukuthi anothe ngelahle elisezingeni eliphezulu. Ngenxa yalokhu sibone iphupho lethu lokulwa nokungasebenzi kwabantu libuya ngoba asifisi ukuba sithi sihola abantu kodwa sibe singenazo izinhlelo zokubasiza ukuba bakwazi ukuziphilisa,” kusho uMavuso.
Ubuye waveza nokuthi okunye abakuzamayo eDumbe ukuba kuvulwe izinkampani ezavalwa, kanti sebeqale uhlelo olubizwa ngokuthi i-Operation Vula oluzobhekana nalo msebenzi. Uthe lolu hlelo baluqale ngokubambisana noMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nokongiwa Kwemvelo, uMnu uSihle Zikalala. Uqhube wathi inkinga abanayo ukuthi kunenqwaba yezinkampani ezazisebenzela eDumbe, ziqashe inqwaba yabantu okwathi uma zivalwa, labo bantu baphenduka ondingasithebeni. Ngaphandle kwalokho iDumbe inezinye izinhlelo ezivezwe uMkhandlu zokuqinisa ukuthuthuka kwayo njengoba isabalwa namadolobha amadala aKwaZulu-Natal asasilele emuva. UMavuso uthe kuzothi mhla lulunye kuMandulo, uNgqongqoshe Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu, uNkk uNomusa MaDube Ncube, azokwethula inkontileka yokwakhiwa kwemigwaqo esedolobheni laseDumbe.
Le migwaqo besekunesikhathi eside kukhalwa ngayo ngenxa yokuthi ibuyisela emuva imizamo yokunxenxa abatshalizimali ngoba imigwaqo ehamba phakathi edolobheni igcwele imigodi exakile.
UMavuso uthi banethemba ukuthi yonke le migwaqo ezokwakhiwa kabusha izolekelela ukuba idolobha libukeke kangcono. Okunye uMkhandlu waseDumbe unezinye izinhlelo ezibekwe eqhulwini zokusiza izintombi ezizobe zihambele uMkhosi WoMhlanga ozoba seSigodlweni seSILO, eNyokeni. “Sathatha isinqumo sokuthi uma kufika uMkhosi WoMhlanga siqasha amatekisi alapha eDumbe ukuba asihambisele izingane esigodlweni, eNyokeni. Ngaphandle kwalokho senza isiqiniseko sokuthi zonke izimoto ezizothwala izingane kuzofanele zihlolwe ngokwemigomo yoMnyango Wezokuthutha ukuze sibenesiqiniseko sokuthi ziphuma nezingane zisesimeni esikahle.
Akugcini lapho sibuye senza isiqiniseko sokuthi uma kuyiwa eMkhosini WoMhlanga, imoto ehamba iMeya iphuma nawo wonke amatekisi ali-15 asuke ethwele izintombi ukuze sibenesiqiniseko sokuthi ayikho imoto ehluphayo emgwaqeni noma umshayeli odala izinkinga. Lokhu sizokwenza ngisho sekubuywa eMhlangeni, sibuye nazo izimoto. Uma senza lokhu siyaqinisekisa ukuthi kula matekisi ali-15, imoto eba sekugcineni kuba ehamba iMeya ukuze ikwazi ukubona konke okwenzakalayo phambili. Nokho ngingasho nje ukuthi asikaze sibenenkinga lapha eDumbe yezingozi ezidalwa izimoto ezisuke zithwele izintombi ngenxa yokuqikekela esikwenzayo,” kusho uMavuso.